နားကြပ်တွေရဲ့ Driver က အသံ Quality အတွက်ဘယ်လောက်တောင်အရေးပါလဲ? – DigitalTimes.com.mm
နားကြပ်တွေရဲ့ Driver က အသံ Quality အတွက်ဘယ်လောက်တောင်အရေးပါလဲ?
admin Jul 05, 2018
သီချင်းနားထောင် ဇာတ်ကားတွေကြည့်တဲ့အခါ အသံအရည်အသွေးကောင်းကောင်းကိုမှ နားထောင်ချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက် အခုဆိုဈေးကွက်ထဲမှာ Brand အမျိုးမျိုး ဒီဇိုင်းအဖုံဖုံနဲ့ နားကြပ်တွေ တော်တော်ရွေးချယ်စရာများပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်နဲ့တကယ်ကိုက်မယ့်တစ်ခုကို ရွေးချယ်ဖို့ကခက်ခဲသလို Specs တွေကြည့်ရုံနဲ့ဝယ်ဖို့ဆိုတာလည်း မလွယ်ပြန်ပါဘူး။
နားကြပ်တစ်ခုရဲ့ Specs တွေဆိုတာကလည်း ပြောရရင်ရှုပ်ပါတယ်။ ဒီပို့စ်မှာတော့ နားကြပ်တွေမှာအရေးကြီးဆုံးအစိတ်အပိုင်းထဲက တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Driver တွေအကြောင်းပါ။ ဒီနားကြပ် Driver တွေက အသံရဲ့အရည်အသွေးကို ဘယ်လောက်ထိတောင် သွားသက်ရောက်နိုင်လဲဆိုတာကြည့်ကြည့်ရအောင်…
နားကြပ် Driver ဆိုတာဘာလဲ?
နားကြပ် Driver တွေဆိုတာကလျှပ်စစ် signal တွေကို အသံအဖြစ်ပြောင်းလဲပေးရတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေဖြစ်လို့ နားကြပ်တွေမှာအရေးပါဆုံးလို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ ပြောရရင် Driver တွေက နားကြပ်ထဲကလော်စပီကာအသေးစားလေးတွေလိုပါပဲ။
Driver တစ်ခုမှာအစိတ်အပိုင်း ၃ခုပါပါတယ်။
၁. သံလိုက်စက်ကွင်းဖန်တီးပေးတဲ့ သံလိုက်
၂. အသံလှိုင်းတွေကိုဖန်တီးဖို့တုန်ခါရတဲ့ Diaphragm
၃. လျှပ်စီးကြောင်းဖြတ်သွားတဲ့အခါ Diaphragm တွေကိုတုန်ခါစေပြီး ကိုယ်ကြားနိုင်တဲ့အသံထိဖန်တီးပေးနိုင်တဲ့ Voice Coils တွေပါဝင်ပါတယ်။
နားကြပ် Driver တွေကတော့အဝိုင်းပုံစံဖြစ်ပြီး ဖန်တီးတဲ့သူနဲ့ ထွက်ချင်တဲ့အသံ Output ကိုလိုက်ပြီး အရွယ်အစားတွေကွာသွားပါတယ်။
အသံအရည်အသွေးနဲ့ Driver အရွယ်အစား ဘယ်လိုပတ်သတ်နေလဲ?
ရှင်းရှင်းလေးပြောရရင် Driver ကြီးလေလေ Bass သံ ပိုကောင်းလေလေပါပဲ။ Driver အရွယ်အစားကြီးတိုင်းတော့ အသံအရည်အသွေးကောင်းသွားတာမဟုတ်ပါဘူး။ အသံအရည်အသွေးအပေါ်မှာသွားသက်ရောက်တဲ့ တခြားအချက်လေးတွေလည်းရှိပါသေးတယ်။
နားကြပ် (Earphone) Driver တစ်ခုက အချင်း 8mm ကနေ 15mm အတွင်းရှိပြီး Headphone တွေရဲ့ Driver ကတော့ အချင်း 20mm ကနေ 50mm အတွင်းရှိပါတယ်။ နားကြပ်ရဲ့အသံကျယ်မကျယ်ဆိုတာ Driver အရွယ်အစားကအဆုံးအဖြတ်ပေးပါတယ်။
လူအများစုသိကြတာက Driver အရွယ်အစားကြီးလေ အသံပိုကောင်းလေလို့သိကြတာပါ။ တကယ်တမ်းက အဲလိုပြောလို့မရပါဘူး။ အချင်းပိုကြီးသွားတဲ့အတွက် Bass သံပိုရှင်းသွားရုံပါ။ Driver ကြီးကြီးတွေကြုံတွေ့ရတဲ့ပြဿနာက ကြိမ်နှုန်းမြင့်တွေကိုထုတ်တဲ့နေရာမှာ အသေးတွေထက်ပိုခက်ခဲတာပါပဲ။
Driver ကြီးလို့ Output မြင့်ပေမယ့် ပိုကောင်းသွားတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ နားကြပ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကို အရည်အသွေးကွာသွားစေတဲ့ထဲမှာ အတွင်းထဲက တစ်ခြားအစိတ်အပိုင်းတွေအမျိုးမျိုးလည်း ပါနေပါသေးတယ်။ ဥပမာ Apple ရဲ့ AirPod တွေဆိုရင်လည်း Driver ဆိုဒ်သေးတာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် တခြား Brand က Driver အကြီးသုံးထားတဲ့နားကြပ်တွေကို ယှဉ်နိုင်တာပါပဲ။ ဆိုတော့ Driver ဆိုဒ်ထက် Driver အမျိုးအစားတွေ ကြိမ်နှုန်းဘယ်လောက်ရနိုင်လဲဆိုတာတွေက အသံကိုအဓိကသွားသက်ရောက်တယ်ဆိုတာကို ထည့်စဉ်းစားမှရမှာပါ။
Driver Unit အမျိုးအစားများ
ခုနကပြောခဲသလို Driver အမျိုးအစားတွေကအသံအရည်အသွေးအတွက်အရေးကြီးပါတယ်။ ဒီတော့ ဒီနေ့ခေတ် နားကြပ်တွေ Headphone တွေမှာသုံးတတ်တဲ့အမျိုးအစားတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
၁. Dynamic Drivers
Bass သံကောင်းတဲ့နားကြပ်ကိုရှာနေတယ်ဆိုရင်တော့ Dynamic Driver သုံးထားတဲ့နားကြပ်တွေကိုရှာပါ။ အချင်းပိုကြီးပြီး Headphone တွေမှာပဲအသုံးများပါတယ်။ သူက bass သံကောင်းကောင်းထုတ်ပေးနိုင်ပြီး အားသိပ်မကုန်ဘဲ အသံ pressure ကောင်းကောင်းပေးနိုင်ပါတယ်။
၂. Planar Magnetic Drivers
သူကတော့ အခုခေတ်ဈေးကွက်ထဲမှာရှိတဲ့ အမြင့်စားအကောင်းစား နားကြပ်တွေ headphone တွေမှာတွေ့ရတဲ့အမျိုးအစားပါ။ သူကတော့ သံလိုက်တွေကြားမှာ Diaphragm ကိုညှပ်ထည့်ထားပါတယ်။
ဒီ Driver တွေကတော့ အရမ်းပြတ်သားကြည်လင်တဲ့အသံတွေကိုပေးနိုင်ပြီး ဘာအသံ Effect မှာထပ်မထည့် မပြင်ဆင်ဘဲနဲ့တောင် အရမ်းအသေးစိတ်ကျတဲ့အသံတွေကို ပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း အသံကွာလတီအရမ်းအသားပေးတဲ့သူတွေက ဒါမျိုးတွေကိုပဲရွေးကြတာပါ။
၃. Balanced Armature Drivers
သူကတော့အရမ်းကိုသေးငယ်တဲ့ Driver တွေဖြစ်ပြီးတော့ ထုတ်လုပ်သူတွေကတော့ နားကြပ်တစ်ဖက်တည်းမှာတင် Driver အများကြီးခွဲထည့်ထားပါတယ်။ in-ear monitor အများစုကတော့ Driver ၁ခုကနေ ၄ခုအတွင်း သုံးထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။
နားကြပ်တစ်ဖက်တည်းမှာတင် Driver တွေခွဲထည့်ထားတဲ့အတွက် ကြိမ်နှုန်းအမျိုးမျိုးထုတ်နိုင်ဖို့ ပိုအဆင်ပြေသွားပါတယ်။ သူကတော့ နားထဲထည့်တဲ့ earbud တွေ in-ear headphone တွေမှာသုံးတတ်ပါတယ်။
၄. Electrostatic Driver
သူကတော့ ရှားပါးပြီးအရမ်းဈေးကြီးတဲ့အမျိုးအစားပါ။ လုံးဝပြီးပြည့်စုံတဲ့အသံအရည်အသွေးကြည်လင်ပြတ်သားမှုကို ပေးနိုင်ပြီး ဈေးလည်းခေါင်ခိုက်နေပြီး အကောင်းစားဆိုတဲ့နားကြပ်တွေမှာသာတွေ့ရတဲ့အမျိုးအစားပါ။
သူလည်းဖုန်းတွေလိုပဲ ကိုယ်ကဘာအတွက်သုံးမလဲဆိုတာပေါ်မူတည်ပါတယ်။ ကိုယ်ကအသံခပ်ကျယ်ကျယ်ကြိုက်တယ် သီချင်းတွေထဲမှာစီးမြောနေရတာကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ dynamic driver တွေထဲက ရှာကြည့်ပါ။
ဂိမ်းအတွက်ပဲသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ bass သံတွေ ဘာတွေသိပ်စဉ်းစားစရာမလိုပါဘူး။ Balanced armature driver တွေထဲက ရွေးလို့ရပါတယ်။
အသံအရည်အသွေးအကောင်းဆုံးကိုမှ နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့ Magnetic Driver တွေရွေးနိုင်ပြီး ဘတ်ဂျတ်ကိုလုံးဝလှည့်ကြည့်စရာမလိုဘူးဆိုရင်တော့ Electrostatic Driver တွေကိုသာရွေးလိုက်ပါ။ ခုနောက်ပိုင်းဆို အသံ noise တွေမပါအောင် Noise Cancellation နည်းပညာတွေကိုပါ ထည့်သုံးပေးလာကြတဲ့အတွက် တော်တော်လေးအဆင်ပြေလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ ဒါဆို နားကြပ်မှာ Driver အရွယ်အစားအပြင် အမျိုးအစားကလည်းအရေးကြီးတယ်ဆိုတာ သိကြ၊သိပြီးပြီထင်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာရော ဘယ် နားကြပ်အမျိုးအစားနဲ့အဆင်ပြေနေလဲဆိုတာ ကွန်မန့်မှာမျှဝေခဲ့ပါဦး……
သီခငျြးနားထောငျ ဇာတျကားတှကွေညျ့တဲ့အခါ အသံအရညျအသှေးကောငျးကောငျးကိုမှ နားထောငျခငျြပါတယျဆိုတဲ့သူတှအေတှကျ အခုဆိုဈေးကှကျထဲမှာ Brand အမြိုးမြိုး ဒီဇိုငျးအဖုံဖုံနဲ့ နားကွပျတှေ တျောတျောရှေးခယျြစရာမြားပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ကိုယျနဲ့တကယျကိုကျမယျ့တဈခုကို ရှေးခယျြဖို့ကခကျခဲသလို Specs တှကွေညျ့ရုံနဲ့ဝယျဖို့ဆိုတာလညျး မလှယျပွနျပါဘူး။
နားကွပျတဈခုရဲ့ Specs တှဆေိုတာကလညျး ပွောရရငျရှုပျပါတယျ။ ဒီပို့ဈမှာတော့ နားကွပျတှမှောအရေးကွီးဆုံးအစိတျအပိုငျးထဲက တဈခုဖွဈတဲ့ Driver တှအေကွောငျးပါ။ ဒီနားကွပျ Driver တှကေ အသံရဲ့အရညျအသှေးကို ဘယျလောကျထိတောငျ သှားသကျရောကျနိုငျလဲဆိုတာကွညျ့ကွညျ့ရအောငျ…
နားကွပျ Driver ဆိုတာဘာလဲ?
နားကွပျ Driver တှဆေိုတာကလြှပျစဈ signal တှကေို အသံအဖွဈပွောငျးလဲပေးရတဲ့ အစိတျအပိုငျးတှဖွေဈလို့ နားကွပျတှမှောအရေးပါဆုံးလို့ ပွောလို့ရပါတယျ။ ပွောရရငျ Driver တှကေ နားကွပျထဲကလျောစပီကာအသေးစားလေးတှလေိုပါပဲ။
Driver တဈခုမှာအစိတျအပိုငျး ၃ခုပါပါတယျ။
၁. သံလိုကျစကျကှငျးဖနျတီးပေးတဲ့ သံလိုကျ
၂. အသံလှိုငျးတှကေိုဖနျတီးဖို့တုနျခါရတဲ့ Diaphragm
၃. လြှပျစီးကွောငျးဖွတျသှားတဲ့အခါ Diaphragm တှကေိုတုနျခါစပွေီး ကိုယျကွားနိုငျတဲ့အသံထိဖနျတီးပေးနိုငျတဲ့ Voice Coils တှပေါဝငျပါတယျ။
နားကွပျ Driver တှကေတော့အဝိုငျးပုံစံဖွဈပွီး ဖနျတီးတဲ့သူနဲ့ ထှကျခငျြတဲ့အသံ Output ကိုလိုကျပွီး အရှယျအစားတှကှောသှားပါတယျ။
အသံအရညျအသှေးနဲ့ Driver အရှယျအစား ဘယျလိုပတျသတျနလေဲ?
ရှငျးရှငျးလေးပွောရရငျ Driver ကွီးလလေေ Bass သံ ပိုကောငျးလလေပေါပဲ။ Driver အရှယျအစားကွီးတိုငျးတော့ အသံအရညျအသှေးကောငျးသှားတာမဟုတျပါဘူး။ အသံအရညျအသှေးအပျေါမှာသှားသကျရောကျတဲ့ တခွားအခကျြလေးတှလေညျးရှိပါသေးတယျ။
နားကွပျ (Earphone) Driver တဈခုက အခငျြး 8mm ကနေ 15mm အတှငျးရှိပွီး Headphone တှရေဲ့ Driver ကတော့ အခငျြး 20mm ကနေ 50mm အတှငျးရှိပါတယျ။ နားကွပျရဲ့အသံကယျြမကယျြဆိုတာ Driver အရှယျအစားကအဆုံးအဖွတျပေးပါတယျ။
လူအမြားစုသိကွတာက Driver အရှယျအစားကွီးလေ အသံပိုကောငျးလလေို့သိကွတာပါ။ တကယျတမျးက အဲလိုပွောလို့မရပါဘူး။ အခငျြးပိုကွီးသှားတဲ့အတှကျ Bass သံပိုရှငျးသှားရုံပါ။ Driver ကွီးကွီးတှကွေုံတှရေ့တဲ့ပွဿနာက ကွိမျနှုနျးမွငျ့တှကေိုထုတျတဲ့နရောမှာ အသေးတှထေကျပိုခကျခဲတာပါပဲ။
Driver ကွီးလို့ Output မွငျ့ပမေယျ့ ပိုကောငျးသှားတာမြိုးမဟုတျပါဘူး။ နားကွပျတဈခုနဲ့တဈခုကို အရညျအသှေးကှာသှားစတေဲ့ထဲမှာ အတှငျးထဲက တဈခွားအစိတျအပိုငျးတှအေမြိုးမြိုးလညျး ပါနပေါသေးတယျ။ ဥပမာ Apple ရဲ့ AirPod တှဆေိုရငျလညျး Driver ဆိုဒျသေးတာပါပဲ။ ဒါပမေယျ့ တခွား Brand က Driver အကွီးသုံးထားတဲ့နားကွပျတှကေို ယှဉျနိုငျတာပါပဲ။ ဆိုတော့ Driver ဆိုဒျထကျ Driver အမြိုးအစားတှေ ကွိမျနှုနျးဘယျလောကျရနိုငျလဲဆိုတာတှကေ အသံကိုအဓိကသှားသကျရောကျတယျဆိုတာကို ထညျ့စဉျးစားမှရမှာပါ။
Driver Unit အမြိုးအစားမြား
ခုနကပွောခဲသလို Driver အမြိုးအစားတှကေအသံအရညျအသှေးအတှကျအရေးကွီးပါတယျ။ ဒီတော့ ဒီနခေ့တျေ နားကွပျတှေ Headphone တှမှောသုံးတတျတဲ့အမြိုးအစားတှကေို ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
Bass သံကောငျးတဲ့နားကွပျကိုရှာနတေယျဆိုရငျတော့ Dynamic Driver သုံးထားတဲ့နားကွပျတှကေိုရှာပါ။ အခငျြးပိုကွီးပွီး Headphone တှမှောပဲအသုံးမြားပါတယျ။ သူက bass သံကောငျးကောငျးထုတျပေးနိုငျပွီး အားသိပျမကုနျဘဲ အသံ pressure ကောငျးကောငျးပေးနိုငျပါတယျ။
သူကတော့ အခုခတျေဈေးကှကျထဲမှာရှိတဲ့ အမွငျ့စားအကောငျးစား နားကွပျတှေ headphone တှမှောတှရေ့တဲ့အမြိုးအစားပါ။ သူကတော့ သံလိုကျတှကွေားမှာ Diaphragm ကိုညှပျထညျ့ထားပါတယျ။
ဒီ Driver တှကေတော့ အရမျးပွတျသားကွညျလငျတဲ့အသံတှကေိုပေးနိုငျပွီး ဘာအသံ Effect မှာထပျမထညျ့ မပွငျဆငျဘဲနဲ့တောငျ အရမျးအသေးစိတျကတြဲ့အသံတှကေို ပေးစှမျးနိုငျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့လညျး အသံကှာလတီအရမျးအသားပေးတဲ့သူတှကေ ဒါမြိုးတှကေိုပဲရှေးကွတာပါ။
သူကတော့အရမျးကိုသေးငယျတဲ့ Driver တှဖွေဈပွီးတော့ ထုတျလုပျသူတှကေတော့ နားကွပျတဈဖကျတညျးမှာတငျ Driver အမြားကွီးခှဲထညျ့ထားပါတယျ။ in-ear monitor အမြားစုကတော့ Driver ၁ခုကနေ ၄ခုအတှငျး သုံးထားတာကိုတှရေ့ပါတယျ။
နားကွပျတဈဖကျတညျးမှာတငျ Driver တှခှေဲထညျ့ထားတဲ့အတှကျ ကွိမျနှုနျးအမြိုးမြိုးထုတျနိုငျဖို့ ပိုအဆငျပွသှေားပါတယျ။ သူကတော့ နားထဲထညျ့တဲ့ earbud တှေ in-ear headphone တှမှောသုံးတတျပါတယျ။
သူကတော့ ရှားပါးပွီးအရမျးဈေးကွီးတဲ့အမြိုးအစားပါ။ လုံးဝပွီးပွညျ့စုံတဲ့အသံအရညျအသှေးကွညျလငျပွတျသားမှုကို ပေးနိုငျပွီး ဈေးလညျးခေါငျခိုကျနပွေီး အကောငျးစားဆိုတဲ့နားကွပျတှမှောသာတှရေ့တဲ့အမြိုးအစားပါ။
သူလညျးဖုနျးတှလေိုပဲ ကိုယျကဘာအတှကျသုံးမလဲဆိုတာပျေါမူတညျပါတယျ။ ကိုယျကအသံခပျကယျြကယျြကွိုကျတယျ သီခငျြးတှထေဲမှာစီးမွောနရေတာကွိုကျတယျဆိုရငျတော့ dynamic driver တှထေဲက ရှာကွညျ့ပါ။
ဂိမျးအတှကျပဲသုံးမယျဆိုရငျတော့ bass သံတှေ ဘာတှသေိပျစဉျးစားစရာမလိုပါဘူး။ Balanced armature driver တှထေဲက ရှေးလို့ရပါတယျ။
အသံအရညျအသှေးအကောငျးဆုံးကိုမှ နှဈသကျတယျဆိုရငျတော့ Magnetic Driver တှရှေေးနိုငျပွီး ဘတျဂတျြကိုလုံးဝလှညျ့ကွညျ့စရာမလိုဘူးဆိုရငျတော့ Electrostatic Driver တှကေိုသာရှေးလိုကျပါ။ ခုနောကျပိုငျးဆို အသံ noise တှမေပါအောငျ Noise Cancellation နညျးပညာတှကေိုပါ ထညျ့သုံးပေးလာကွတဲ့အတှကျ တျောတျောလေးအဆငျပွလောတာကိုတှရေ့ပါတယျ။ ဒါဆို နားကွပျမှာ Driver အရှယျအစားအပွငျ အမြိုးအစားကလညျးအရေးကွီးတယျဆိုတာ သိကွ၊သိပွီးပွီထငျပါတယျ။ လကျရှိမှာရော ဘယျ နားကွပျအမြိုးအစားနဲ့အဆငျပွနေလေဲဆိုတာ ကှနျမနျ့မှာမြှဝခေဲ့ပါဦး……
Earphone driverHeadphone driver
Xiaomi Mi A2 ဒီဇိုင်းနဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲလ်အချက်အလက်ပုံများပေါ်ထွက်လာခဲ့